Hargaysa: Wiil Aabihii Ahaa Ingiriis Oo Taageero Ka Dalbaday Dawladda Britain | Salaan Media
Hargaysa: Wiil Aabihii Ahaa Ingiriis Oo Taageero Ka Dalbaday Dawladda Britain
July 1,2013 Hargaysa(SM) Nimcaan Bowden oo ah wiil dhalinyaro ah oo Aabihii ka soo jeedo Ingiriiska ayaa ka codsaday inay gacan u soo fidiso dawladda Ingiriiska.
Nimcaan oo ku nool Somaliland waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa shan carruur ah oo uu dhalay Aabihii Brian Bowden oo ka yimi Dartmouth. Warbixin xaaladda wiilkani ay ka qortay Dartmouth Chronicle, ayaa u dhignayd sidan:-
– “Brian Bowden oo ku dhashay Dartmouth sannadkii 1928, waxa uu ka soo tegay Britain 1958, si uu uga shaqeeyo wakaaladdii biyaha Hargeysa, Somaliland ka dibna waxa uu halkaa ku guursaday haweenay Soomaali ah.
– Bilawgii sannadkii 1991, markii la afgembiyay Maxamed Siyaad Barre, waxa uu Mr Bowden ka shaqeynayay saafaraddii Ingiriiska ku lahaa Muqdisho, Soomaaliya.
– Ian McClunay, oo xilligaa ahaa Ambassador waxa daadgureeyay Ameerikaanka isaga iyo shaqaalihii kale ee safaaradda lixdii Jenaweri 1991-kii.
– Hase yeeshee Mr Bowden isagu halkii ayuu ku hadhay si uu u ilaaliyo qoyskiisii, iyada oo ay hareerahooda ka socdeen dagaal sokeeye oo uu dhiig qulqulayo.
Dawladda British-ka ayaa xilligaasi sheegtay sida uu suxufiga iyo qoraaga Aidan Hartlay ku qorey buuggiisii “The Zanzibar Chest” Ingiriis ninkii ugu dambeeyay eek u hadhey Soomaaliya, Mr Bowden waxa la siiyay fursad uu kaga baxo, balse waxa uu doortay in aanu tegin, si uu u ilaaliyo xaaskiisii, carruurtiisii. Safaaradda iyo shaqaalaheedii ahaa lookalka.
Haseyeeshee wax sidaa ahi kama soo wareegin markii si fool xun Mr Bowden loogu horgawracay qoyskiisii.
Xafiiska arrimaha dibadda ayaa markaasi sheegay inay dileen koox hubeysani, isla markaana sheegay in Mr Bowden la siiyay fursada tegitaanka balse uu isagu lahaa go’aanka joogitaanka.
Sida ay tebisay BBC, wareysi ay la yeelatay wax yar ka hor dilkiisii, Mr Bowden, waxa uu sheegay inay ahayd sababta uu u negaaday ooridiisa oo ahayd Soomaali, isla markaana aanu haysan lacag ku filan oo uu ugu duulo UK.
– Email ay qortay jariiradani ayaa Nimcaan Bowden oo ku jirey da’dii labaataneeyaha oo ku nool kaam ku yaal Hargeysa, waxa uu yidhi “Aabahay waxa uu ahaa muwaadin Ingiriis ah, kii ugu dambeeyay ee ka shaqeynayay Safaaraddii Ingiriiska ee Muqdisho bilawgii 1991, markii ay Soomaaliya ku dhacday qaska iyo qalalaasaha ee ay burburtay dawladdii dhexe.”
– Waxa uu intaa ku daray ka dib markii ay dawladdii Ingiriis joojisay mushaharkii shaqaalaha in Aabihii oo aad binu’aadamnimada ugu dheeraa inuu lacag soo amaahday si uu ugu bixiyo mushaharooyinka. Ka dibna ay budhcad halkaasi ka soo raacday ay dhaceen, dileena.
– Nimcaan waxa uu sheegay markii la dilay Aabihii inay qoyskii ku soo laabteen Hargeysa, balse ay walaalkiisii weynaana ku waayeen fowdadii Muqdisho. Waxaanu intaa raaciyay “Hooyaday Ruun Aw Daahir Maxamed, iyana waxa ay dhimatay 1994, ka dibna waxa aan waajahay waqti adag iyo nolol kakan; “waxa aan ka mid noqday ciyaalka ku dayacan jidadka dooxa Hargeysa ee ku nool lafaw dhagax, waxaan noqday kabo baalasheeye.
Waxaanan ka soo qabtay shaqo kasta oo culus oo carruuri ka qabato, goobaha ganacsiga ee Hargeysa.”
Nimcaan, waxa uu haatan ka dooneyaa dawladda Ingiriiska inay u oggolaato isaga iyo xaaskiisa inay helaan baasboorada si ay u tagaan Britain.
Haddaba, Mark Jones, oo ah hawl fuliyaha urur ganacsi oo fadhigiisu yahay London oo isagu taageera arrinta Nimcaan, ayaa yidhi “Brian Bowden ooridiisii (Soomaali) iminka waa ay geeriyootay, waxaanay carruurtoodii ku jiraan xaalad niyad jab ah oo ay ugu darantay inay yihiin mutawalidiin. Wiilkii ugu yaraa reer Bowden oo ah Nimcaan, waxa uu soo ahaa agoon tan iyo lix jirkiisii, waxaanu ku soo noolaa dariiqyada maadaama ay dad kale ay degeen gurigii qoyskooda, isla markaana aanu haysan wax awood ah oo uu u maro sharciga.
Nimcaan Bowden Aabihii magaciisa oo dhameystiran waxa la odhan jirey ‘Brian William Thomza Bowden, waxaanu ku dhashay Dartmouth Juun 27, 1928, sida ku cad sawirada baasaaboorkiisii oo ay email kaga heshay jariiradda warbixinta qortay wakiilada ama ehelada Nimcaan.